ओलीसँग लागेका पूर्वमाओवादी नेतालाई प्रचण्डको प्रश्न: के माओवादी जनयुद्ध कुहिएको फर्सी हो?
12th January 2021, 03:14 pm | २८ पुष २०७७
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अहिले देखिएको पार्टी विभाजनको लडाइँ क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीचको लडाइँ भएको बताएका छन्।
पोखरामा कास्की जिल्लास्तरीय कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नेकपाको अर्को पक्ष (ओली समूह)ले लगाएको आरोपलाई खारेज गर्दै भने, 'यो लडाइँ जनताको पक्षमा जाने कि नजाने भन्ने लडाइँ हो, यो लडाइँ भनेको क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको बीचको लडाइँ हो। अहिले हाम्रो मुख्य लडाइँ भनेको एकता गर्दा तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले अंगीकार गरेको विचार सिद्धान्तमा अडिक रहने कि छाड्ने भन्ने हो।'
उनले शनिवार कमलादीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी जनयुद्ध कुहेको फर्सी भएको भन्दै दिएको प्रतिक्रिया प्रतिसमेत आपत्ति जनाए। उनले ओली पक्षमा लागेका पूर्व माओवादी नेताहरुलाई पनि प्रश्न गरे- 'के जनयुद्ध कुहिएको फर्सी हो?'
उनले नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादीले चलाएको जनयुद्धको भूमिकालाई स्पष्ट उल्लेख गरिएको स्मरणसमेत गराए।
'माओवादी जनयुद्धले नेपालमा राजनीतिक जागरण ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। संविधान निर्माण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्यो भन्ने अहिले पनि छ,' उनले भने, 'अहिले त्यसविरुद्ध बोल्दा केही साथीहरु पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई तपाईँहरुले पनि सोध्नुहोला के माओवादी जनयुद्ध कुहेको फर्सी हो?'
राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीलेसमेत हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे- 'के उहाँले गरेको हस्ताक्षर किर्ते हो?, मैले जालझेलमा पारेर हस्ताक्षर गराएको हो? यदि होइन भने उहाँको विचार र राजनीति प्रति गरेको घात हो।'
उनले अहिले देखिएको यो लडाइँ अहिले भर्खरै आएको नभइ पार्टी एकता भए देखि नै आएको बताए। 'केन्द्रीय कमिटीको बैठक पछि थप अगाडि बढ्यो। बैठकमा केपी ओली बैककको सुरु र अन्त्यमा देखा पर्नुभएको थियो। केपी र केपी नजिकका साथीहरुका लागि असैह्य भयो। त्यसपछि भेला गरेर पार्टीलाई प्रचण्डले ग्रिपमा लाने भयो भन्ने भएर यो विचारको लडाइँ र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको लडाइँ बनाउने प्रयास गरियो,' उनले भने।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले पदका लागि पार्टी फुटाएको आरोप लगाए। 'अहिले सचिवालयमा तीन तीन वटा पूर्व प्रधानमन्त्री पनि छौँ। म दुई पटक प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री छोडे पनि। तर पार्टी फुटाइन्। माधवजी पनि प्रधानमन्त्री हुनु भयो। झलनाथ जी पनि प्रधानमन्त्री हुनु भयो,' प्रचण्डले भने, 'ओलीजीले प्रधानमन्त्री बाट राजीनामा दिन भन्दै उहाँहरुलाई दबाब दिनुभयो। उहाँहरुले प्रधानमन्त्री छाड्नुभयो पार्टी फुटाउनु भएन्। अहिले ओली आफैले भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री छाड्दिन बरु संविधान कुल्चिदिन्छु।'
'पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कोभिड-१९ को विषयमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गर, जनताको काम गर भन्ने तयारी थियो,' उनले भने, 'सचिवालयमा बहुमत भएन्। स्थायी समितिमा बहुमत भएन। त्यसपछि अल्पमतमा परेर उनले पार्टी फुटाउन लागे।'
ओलीले बल र पावर लगाएर मान्छेहरुलाई धम्क्याउने तर्साउने गरेको आरोपसमेत लगाए।
उनले निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह सूर्य र नाम नेकपा आफूहरुले पाउने दाबी गरे। 'हिजो हामी निर्वाचन आयोगमा पुगेर आयौँ। केपी ओलीका मान्छेले निर्वाचन आयोगले थर्काएर पठायो भनेर प्रचार गर्दै छन्,' उनले भने, 'हिजोको छलफल पछि हामी विश्वस्त भएका छौँ। सूर्य हाम्रै हो। नेकपा हाम्रै हो।'